Malawi:in ka badan 2.5 milyan oo carruur ah ayaa la tallaaley, in ka badan 8000 oo bukaan ayaana la daryeelayaa - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Malawi:in ka badan 2.5 milyan oo carruur ah ayaa la tallaaley, in ka badan 8000 oo bukaan ayaana la daryeelayaa
22.07.2010 | Qeybta Guud
Laga soo bilaabo bishii Febraayo, ayaa ay Malawi ka jirtey jadeecadii ugu xumeyd ee ka dhacda 13 sano. Iyada oo ay iskaashanayaan maamulka caafimaadka ee dalka, ayaa kooxaha MSF ay daryeelayaan bukaannada waxaana ay bilaabeen ololayaal tallaal oo lagu gaarayo carruur ka badan 2.5 milayn. Laakiin waxaa loo baahan yahay dadaallo dheeri ah oo heer qaran iyo heer caalamiba ah si loo baabi’iyo cudurkan ba’an ee halista geliyey nolosha dad badan.
Sida ay qabaan tirooyinka rasmiga ah ee ay soo saartey Malawi, in ka badan 9,000 oo qof ayaa ilaa iyo hadda ay jadeeco ku dhacdey waxaana u dhintey 44 qof. Tirooyinka dadka uu ku dhaco cudurka jadeecada ayaa waxa ay ka kor mareen intii caadiga ahayd 23 degmo oo ka mid ah 28ka degmo ee dalka, iyada oo xaalado jadeeco ah oo cusub ay weli sii faafayaan degaanno cusub.
Kooxaha MSF ayaa ilaa hadda go’aansaday in dadaalladooda ay diiradda ku saaraan lix degmo oo ay ugu badan tahay nisbada – tirada dadka cusub ee uu cudurku ku dhacay marka loo eegayo muddo iyo tiro dad cayiman. Degmooyinkani waa Blantyre, Chiradzulu, Lilongwe, Mangochi, Mzimba iyo Thyolo.
Iyada oo kaashaneysa Wasaaradda Caafimaadka ee Malawi, ayaa MSF ay daryeel caafimaad siineysay 8106 bukaannada jadeecada ah laga soo bilaabo bishii Abriil. MSF waxa ay taageereysey 88 cusbitaallo iyo xarumo caafimaad oo ku yaalla degaanno miyi iyo magaalaba isugu jira. Taageerada MSF waa ay ballaaran tahay oo waxa ay ka bilaabataa min xoojinta iyo tababaridda shaqaalaha caafimaadka ilaa daaweyn iyo qalab ay ku deeqdo. Blantyre, oo ay jadeecadu ku faaftey xabsiyada ugu waaweyn, ayaa waax 15-sariirood ka kooban xabsiyada dhexdiisa looga sameeyey maxaabiista qaba jadeecada.
Jadeecadu waa sabab weyn oo ay u dhintaan carruurta iyo dadka waaweyn dunida oo dhan. Cudurka ayaa sababi kara dhibaatooyin kale oo halis ah waxaana uu kordhiyaa halis qofku u galo nafaqo-xumo.Si looga hortago in cudurku uu ka sii daro, ayaa MSF oo ay iskaashanayaan Wasaaradda Caafimaadka ay bilaabeen ololeyaal tallaal oo dhowr ah. Intii u dhaxaysey 3dii iyo 18kii Maajo, ayaa kooxaha MSF waxa ay 1.1 milyan oo carruur ay da’doodu u dhaxayso lix bilood iyo 15 sano jir ku tallaaleen degmooyinka Blantyre, Mzimba Chiradzulu. Maalintii ugu horreysey ayaa Blantyre, lagu tallaaley dad ka badan 50 000 qof, iyada oo mid kasta oo ka mid ah kooxaha tallaalka ay tallaaleysey 1 500 oo carruur ah maalin kasta. Laga soo bilaabo 10kii Maajo, ayaa MSF ay olole tallaal oo kale ka waddey degmada Thyolo. Iyada oo ay iskaashanayaan Wasaaradda Caafimaadka, ayaa kooxaha MSF ay rajeynayaan in degmada Thyolo ku tallaalaan 285 000 oo carruur ah.
Ololayaal kale oo tallaal oo ballaaran ayaa la diyaarinayaa waxaana la doonayaa in dhowaan laga bilaabo Lilongwe (oo lagu beegsanayo 900 000) iyo Mangochi (400 000). Arrintan ayaa ay tahay in carruurta la tallaaley ay ka dhigto tiro ka badan 2.5 milyan.
Kooxo kale oo kuwa MSF ah ayaa qiimeynaya xaaladaha degmooyin kale, sida Machinga iyo Balaka, oo ku yaalla koonfur-galbeed, halkaas oo xaalado jadeeco ah laga soo sheegey. Kooxaha MSF ayaa daawo u bilaabaya bukaannada waxaana ay, 12ka Juunyo, degaannadaas ka bilaabi doonaan olole tallaal oo ballaaran oo lagu tallaalayo 400 000 qof.
Shaqaale kale oo caalami ah iyo kuwo dalka u dhashey ayaa yimid si ay u xoojiyaan kooxaha halkaa ka shaqeynayey ka hor intii aanu bilaaban cudurka. 1 300 shaqaalaha MSF ah, oo badidoodu yihiin shaqaale Malawiyaan ah, ayaa hadda wada hawlaha degdegga ah ee MSF.
Laakiin in kasta oo ay jiraan dhammaan dadaalladan, haddana cudurka jadeecada ee hadda ka jira Malawi ayaa noqdey mid welwel leh. Sidaa daraaddeed, waxaa loo baahan yahay in kheyraad kale loo raadiyo si heer qaran ah iyo si heer caalami ahba si markaa si taabogal ah wax looga qabto cudurka oo loogana baaqsado in ay nafo badan u dhintaan.
Jadeecadu, waa xaalad degdeg ah oo gobolka ka taagan
Malawi oo keliya ma ahan dalka koonfurta Afrika ku yaalla ee ay ka jirto jadeeco. Dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey, ayaa Mozambique, Koonfur Afrika, Swaziland, Zambia iyo Zambabwe ay sheegeen in dadkooda ku bateen xaaladaha jadeecada.
Dalka Zimbabwe, cuddurka jadeecada ee dhowaanahan dillaacay waxa uu saameeyey 55 ka mid ah 62da degmo ee uu dalka Zimbabwe ka kooban yahay waxaana ay dishey 384 carruur ah. Wasaaradda Caafimaadka ayaa bilowdey olole tallaal oo dalka oo dhan laga fuliyo kaas oo lagu beegsanayo dhammaan carruurta (ku dhowaad 5 milyan) ay da’doodu u dhaxayso 6 biloood ilaa 14 sano. MSF ayaa maamulka ka gargaareysa in daryeel iyo tallaalo lagu bixiyo Buhera iyo Epworth.
Koonfur Afrika, ayaa ay dowladdu ku soo warrantey in bukaanno ka badan 14,000 ay jadeeco ku dhacdey dhammaan sagaalka gobol ee dalka laga soo bilaabo 2009kii ilaa bishii Maajo 2010ka. Waxaa la soo sheegey in toddobaad kasta kordhayeen dadka cusub ee uu ku dhacayo cudurka gobollada qaar, sida Kwazulu-Natal iyo Mpumalanga. MSF ayaa taageertey tallaalka laga fulinayey magaalada Khayelithsa, kaas oo lagu beegsanayo qiyaastii 100,000 carruur ay da’doodu u dhaxayso 6 bilood ilaa 15 sano ah.
Dalka Mozambique, ayaa MSF ay taageertey ololayaasha tallaalka ee ka dhacayey dhinaca waqooyiga ee dalka ee xuduudda la leh Malawi. Kooxaha MSF ee Swaziland iyo Zambia ayaa si hoose ula socda xaaladda jadeecada ee dalka.
Tags: jadeeco, Koonfur Afrika, Malawi, talaal, Zimbabwe